Bulding Glass, Glass Tempered, Glass insulated - Glass Joyshing
Yantai Joyshing Glass Co., LTD. ， Amin'ny maha mpanamboatra sy mpamatsy vokatra fitaratra isan-karazany any Shina azy manokana, mikendry ny hanome vahaolana mandroso tokana amin'ny fanamboarana, ny haingon-trano, ny fitaterana, ny fiarovana, ny fialam-boly ary ny fanatanjahantena sns.
Fantatrao ve ny fomba fametrahana tsara ny varavarana fitaratra mihetsiketsika
Miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka sy ny fampandrosoana ny indostrian'ny vera, ny vokatra fitaratra dia nampidirina tanteraka tamin'ny fiainantsika, ny haingo ao an-trano amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaratra dia matetika kokoa, ary ny varavarana fitaratra dia tsy amin'ny indostrian'ny fananganana ihany no fantatra fa matetika ampiasaina. amin'ny deco ...
Glass miondrika mafana nataon'i ADMIN NOV. 24, 2020 Ny fitaratra haingon-trano dia vokatra fitaratra ampiasaina manokana amin'ny haingon-trano, ny ankamaroany dia efa namboarina lalina, ao anatin'izany ny embossing, frosting, sary hosodoko, sns Joysh ...
Fitaratra mpiambina goavambe
Nosoratan'i Yantai Joyshing Glass Co., Ltd taorian'ny fananganana tetik'asa tetezana cantilever fasika yantai HouSha Square, nahavita tamim-pahombiazana, ny fitambaran'ny vera fitetezana mirefy 136 metatra, ny valan-javaboary iray manontolo dia nampiasa vera voaravaka 15 + 15 somary voahosotra, vera tokana halavan'ny ...
Ny tombony azo amin'ny vera milamina
Midika hanarahana ny fenitry ny firenena amin'ny vera misy laminated, vera antitra ary vera poaka vita tamin'izy ireo. Anisan'ireny, ny fahombiazan'ny fitaratra feno laminated sy vera poakaty vita amin'ny vera laminated no tsara indrindra. Amin'ny trano maoderina dia tsara ny effets insulateaux, ary nanjary iray ...
Glass vera, ny tombony ary ny fatiantoka, hainao daholo?
Ny fitaratra antonony dia karazana fitaratra azo antoka. Raha ny marina, io koa dia karazana vera nopotserina. Mba hampitomboana ny tanjaky ny vera, dia matetika ny fomba simika na ara-batana no ampiasaina hananganana tsindrin-tsindrona eo ambonin'ny fitaratra. Rehefa iharan'ny herin'ny hery ivelany ny vera, ny surfa ...